Qorshayaal Waaweyn Oo Loogu Talagalay Wasiirka Dalxiiska Jamaica Ee UK Iyo Bariga Dhexe
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Qorshayaal Waaweyn Oo Loogu Talagalay Wasiirka Dalxiiska Jamaica Ee UK Iyo Bariga Dhexe
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dadka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Hoggaamiye dalxiis oo caalami ah oo wata ajandaha Jamaica ayaa tagay UK iyo Bariga Dhexe. Wuxuu leeyahay qorshe weyn, ajende weyn, iyo riyooyin waaqici ah oo waaweyn.
Ka dib suuqyadiisii ​​aadka u guulaystay ee Waqooyiga Ameerika, Wasiirka Dalxiiska, Hon. Edmund Bartlett ayaa ka tagay jasiiradda shalay, isaga oo ay weheliyaan koox heer sare ah si ay u sahamiyaan fursadaha maalgashi iyo inay safraan dalxiiska Jamaica oo ka socda Boqortooyada Ingiriiska (UK) iyo Bariga Dhexe.
Kahor bixitaankiisa, Wasiir Bartlett wuxuu yiri, “Annagoo raadinayna dardargelinta soo -kabashada warshadaha dalxiiska, waxaan hoggaamin doonaa wafdi ka socda Imaaraadka Carabta (UAE), Saudi Arabia iyo UK si loo sahamiyo fursadaha maalgashiga tooska ah ee shisheeye (FDI) ee waaxda dalxiiska iyo sidoo kale xeebaha soo galayaasha ka imanaya suuqyadeena saddexaad ee ugu weyn. ”
Wuxuu sheegay in maalgashigu kaalin muhiim ah ka qaadan doono dib u soo kabashada dalxiiska iyada oo la siinayo dhaqaalaha lagama maarmaanka u ah dhisidda iyo kor u qaadista mashaariicda lagama maarmaanka u ah horumarinta iyo kobcinta awoodda dalxiiska.
Blitz wuxuu ka bilaabmaa bartilmaameed suuqa safarka xafladda Dubai World Expo 2020 ee Imaaraadka Carabta. Jamaica wuxuu ka mid yahay in ka badan 190 soo -bandhigayaal bandhigga oo leh barxad muujineysa badeecooyinkii ugu dambeeyay iyo hal -abuurnimadii ugu dambeysay ee hoos timaada mowduuca “Jamaica ayaa Dhaqaajisa”, isku xirka adduunka iyada oo loo marayo muusikadeeda gaarka ah, cuntada, isboortiga, iyo dhinacyo kale oo dhaxalkeeda hodanka ah.
Wasiirka iyo kooxdiisa ayaa inta ay ku sugan yihiin Imaaraadka waxay la kulmi doonaan Hay’adda Dalxiiska ee dalka si ay uga wada hadlaan iskaashiga maalgashiga dalxiiska ee gobolka; Hindisaha dalxiiska ee Bariga Dhexe; iyo marin u helka Waqooyiga Afrika iyo Aasiya, iyo fududeynta qaadista hawada. Sidoo kale, waxaa jiri doona kulamo lala yeelanayo madaxda DNATA Tours, oo ah hawl wadeenka ugu weyn ee dalxiiska ee UAE; xubnaha Jaaliyadda Jamaica ee UAE; iyo saddex diyaaradood oo waaweyn oo ku yaal Bariga Dhexe - Emirates, Ethiad iyo Qatar.
Imaatinka Imaaraadka, Wasiir Bartlett wuxuu ku wajahan yahay Riyadh, Saudi Arabia, halkaas oo uu ka hadli doono 5 -tath Sanad -guurada Hindisaha Maalgashiga Mustaqbalka (FII). FII sannadkan waxaa ku jiri doona wada-hadal qoto-dheer oo ku saabsan fursadaha maalgashi ee cusub ee caalamiga ah, falanqaynta isbeddellada warshadaha, iyo isku-xirnaanta aan la bar-bar dhigi karin ee agaasimayaasha guud, hoggaamiyeyaasha adduunka, iyo khubarada. Waxaa ku wehlin doona Senator Hon. Aubyn Hill isaga oo ah Wasiir aan lahayn Portfolio ee Wasaaradda Kobaca Dhaqaalaha iyo Shaqo -Abuurka (MEGJC), oo mas'uul ka ah Biyaha, Dhulka, Soo -saarka Geeddi -socodka Ganacsiga (BPOs), Maamulka Aagga Dhaqaalaha Gaarka ah ee Jamaica iyo mashaariicda gaarka ah.
Dhawaan ayaa la qaaday la-taliyihii Dawladda UK ee ka dhanka ahaa dhammaan safarada aan muhiimka ahayn ee Jamaica waxay u gogol xaadhay Wasiir Bartlett inuu hoggaamiyo koox heer sare ah London, Oktoobar 30 ilaa Nofeembar 6, oo lagu beegsanayo suuqa UK. Ka -qayb -galayaasha daneeyayaasha muhiimka ah ayaa lagu qaban doonaa Virgin Atlantic, China Forum iyo British Airways ee Suuqa Safarka Adduunka ee London (WTM), oo ah mid ka mid ah shirarka sanadlaha ah ee ugu muhiimsan waaxda socdaalka caalamiga ah.
Sidoo kale, wasiirka dalxiiska ayaa marti qaas ah u noqon doona 9 -kath Casho U -doodid Ururka Socdaalka Baasifigga Aasiya. Isagoo sii wata mas'uuliyadihiisa caalamiga ah, wuxuu kaloo ka qaybgeli doonaa UN World Tourism Organization, World Travel and Tourism Council iyo WTM Summit Summit.
Safarkan oo aad u buuxo ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah waraysiyo warbaahineed, ka -qaybgallo ka hadlaya Shirka Caalamiga ah ee City Nation Place ee London, kulan guddi oo ka tirsan Xarunta Maareynta Dhibaatooyinka Dalxiiska Caalamiga ah iyo Xarunta Maareynta Dhibaatooyinka (GTRCMC), iyo kulan lala yeeshay jaaliyadda Jaaliyadda Jamaica ee UK.